काठमाडौं — यदि तपाईं कारको शौखिन हो वा कारका विषयमा रुचि राख्नुहुन्छ भन्ने कुनैदिन अवश्य पनि सोंच्नुभएको होला कि संसारको सबैभन्दा ठूलो वा लामो कार कुन हो भनेर । संसारको सबैभन्दा लामो कार कस्तो देखिएला ? यसमा कतिजना मानिस बस्न सक्दछन् होला तथा त्यो कारमा कस्ता–कस्ता सुविधा हुन्छन् होला ? भन्ने जिज्ञासा पनि अवश्य हुन्छ ।
संसारको सबैभन्दा लामो यो कार बनाउनका लागि एक, दुई होइन पूरै १२ वर्ष लागेको थियो ।
संसारको सबैभन्दा लामो यो कारको नाम ‘अमेरिकन ड्रिम’ हो । यो निकै पुरानो कार हो । गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डसले यसलाई संसारको सबैभन्दा लामो कारको रुपमा सन् १९८६ मा दर्ज गरेको थियो ।
अमेरिकन ड्रिम कारको लम्बाई १ सय फिट छ । टाढाबाट हेर्दा यो कार कुनै टायवाला रेलजस्तो देखिन्छ ।
यो कारलाई कुनै गाडी निर्माता कम्पनीले बनाएको होइन । जे ओहरबर्गले यो कारको डिजाइन गरेका थिए । उनी वास्तवमा कारका शौखिन थिए ।
यो कार तयार गर्न ओहरबर्गलाई करीब १२ वर्ष लागेको थियो । मुख्यरुपमा फिल्महरुमा प्रयोग गर्नका लागि यो कार निर्माण गरिएको थियो । कारलाई भाडामा पनि दिइन्थ्यो । कारको भाडा प्रतिघण्टा २ सय अमेरिकन डलरसम्म हुन्थ्यो ।–एजेन्सी